सोरायसिसको साथ बाँच्न: भावनात्मक पक्ष कस्तो हुन्छ - समुदाय | सेप्टेम्बर 2021
मनोरञ्जन कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा चेकआउट समुदाय, कम्पनी समुदाय खेलहरु कम्पनी औषधि जानकारी कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि बनाम मित्र औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार
मुख्य >> समुदाय >> सोरायसिसको साथ बाँच्न वास्तवमै के हो
सोरायसिसको साथ बाँच्न वास्तवमै के हो
सोरायसिस एक स्वचालित प्रतिरक्षा अवस्था हो जसले छाला कोषहरूको निर्माणको कारण गर्दछ जसले सेतो र फ्लाकी वा रातो र फुलेको देख्न सक्छ। जब तपाईं सोरायसिसको बारेमा सोच्नुहुन्छ, तपाईं चिढचिढो, प्याचि छालाको बारेमा सोच्नुहुन्छ। जब म सोरायसिसको बारेमा सोच्दछु? यो भावनात्मक पक्ष हो जुन दिमागमा आउँछ।
मलाई याद छ पहिलो पटक मलाई भोलिपल्ट लाज लाग्यो जस्तो यो हिजो थियो। म खाद्यान्न पसलमा केही समस्याहरू र अन्तहरू टिपेर थिए। जाँच गर्दै गर्दा, मैले क्यासियरसँग एक रमाईलो कुराकानी गरेको थिएँ र उसले मलाई मेरो परिवर्तन हस्तान्तरण गरिरहेको थियो। उसले मेरो हातको हत्केलामा यो समात्दै थियो जब मैले उसको आँखा मेरो कलाईमा रातो स्केला प्याचमा खसेको देखें। उनको अनुहारबाट मुस्कान खस्यो, र उसले आफ्नो हात आधा फिट टाढा तानेर खानीमा झिक्यो। यो पछिल्लो पटक यस्तो भएको थिएन। अकस्मात्, उसको ब्यवहारमा बढाइचढाइ गरिएको पाली र उनी घृणा र डरमा दिक्क लाग्ने तरीका मसँगै छ।
मलाई थाहा छ यो ठूलो सम्झौताको जस्तो लाग्दैन। मलाई थाहा छ म अरूको विचारको बारेमा मतलब गर्न सक्दिन, कि म आफ्नो छालामा सहजै छु भन्ने छु। तर यो त्यति गाह्रो हुन सक्छ जब यो मेरो आफ्नै छालाले मलाई धोका दिन्छ। म कसरी आफुलाई राम्रो महसुस गर्न सक्छु जब मलाई थाहा छ मेरो छेउको खुजलीको सानो क्षेत्र मेरो वरिपरि भएकाहरूका लागि शारीरिक विकर्षक नै भइसकेको छ?
सोरायसिसको साथ बाँच्ने भावनात्मक टोल
मैले धेरै वर्षहरू मेरो छालामा जम्मा हुने फ्लेमिंग प्याचहरूको सर्तमा पुग्न प्रयास गरें। जब अस्थिर, कहिले काँही रगत खतरनाक दागहरू मेरो टाउकोदेखि कुहिनो र घुँडासम्म फैलियो, तब मैले लामो सर्टहरू लगाउन थालें। म टी-शर्ट लगाएर बटन डाउनमा बदल्छु, रणनीतिक हिसाबले कुहिनिको केही अंश तर्फ लाग्यो। यो ठीक छ, मैले आफैलाई भनें। म यसको सामना गर्न सक्छु। पट्टिका फोरमहरू, हात र बछारहरूमा देखिन थालेपछि मैले मेरो आस्तीन घुमाउन छोडिदिएँ र म पूरै लम्बाइको प्यान्ट लगाउँथें the चाहे मौसम वा स्थान नै फरक पर्दैन। समुद्र तटमा जीन्समा बिछ्याउने र पूर्ण-लम्बाइको बटन-डाउन सामान्य छ, मैले सोचेँ। यसले फरक पार्दैन यदि मानिसहरूले सोच्दछन् कि यो अनौंठो देखिन्छ, कमसेकम तिनीहरू मसँग डराउँदैनन्।
यो बाहिर जान्छ, म एक्लो छैन। यो मनोवैज्ञानिक विनाशकारी बिरामीहरूको लागि विनाशकारी हुन सक्छ जो आफ्नो शरीरमा देखिने रातो प्याचहरू छन्, भन्छन् डोरिस डे, MD , एक बोर्ड-प्रमाणित त्वचा विशेषज्ञ। मसँग बिरामीहरू छन् जो युवा महिलाहरू छन् जसले स्कर्ट वा शर्ट्स लगाउँदैन यदि तिनीहरूको खुट्टामा कुनै प्याच छ भने वा अन्य बिरामीहरू जो मिति वा जागिरमा जाने छैनन् यदि उनीहरूको हातमा संलग्नता छ भने।
मैले झन्डै दुई वर्ष झूट बोले। मैले मेरो छाला लुकाए र आफैंलाई भने कि म ठीक छु। जब म मेरो वरिपरिको मानिससँग विच्छेदन महसुस गरिरहेको थिएँ, जसलाई अब म आफ्नो छाला हेर्न अनुमति दिँदिन। यो त्यस्तो थिएन कि तिनीहरू क्रूर हुनेछन्। कोही पनि कहिल्यै थिएन, कम्तिमा जानाजानी थिएन। किनभने तिनीहरू मेरो छालामा आराम गर्न आउँदा म तिनीहरूको आँखामा हेर्न चाहन्न। म लाला के हो भनेर वर्णन गर्न चाहन्न। वा अझ इमान्दारीसाथ, म फेरि लाजमा पर्नु चाहन्न। मेरो दाहिने कान पछाडि अलिकति जलनको साथ शुरू भएको अवस्थाले मलाई खिसी गरिरहेको थियो, र मेरो जीवनलाई बिगार्ने खतरामा थियो।
उपचार विकल्पहरूको बढ्दो सूची
त्यतिखेर जीवविज्ञानहरू सामान्य हुँदै गइरहेका थिए, तर अनुसन्धानको बाबजुद ती तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित थिए, म अझै पक्का छैन। मैले यी देखिने चमत्कार ईजेक्सनको बारेमा पढें जुन मलाई मेरो निरन्तर शारीरिक र मानसिक बेचैनीबाट मुक्त गर्न सक्दछ, मलाई कुनै मतलब थिएन यदि यो सुरक्षित छ भने। मेरो सोच यो हो कि यदि मैले एक गोली लिन सक्छ जसले मेरो सोरायसिसलाई निको पार्छ, तर मेरो जीवनको अन्त्यमा १० वर्ष काट्छु, म यसलाई लिनेछु। तब मैले महसुस गरें यस रोगले मेरो जीवनमा गरिरहेको थियो। तलतिर सर्पिलबाट आफूलाई बचाउन मैले केहि गर्न आवश्यक छ।
त्यसैले मैले डुबकी लिएँ र मैले गरेको भन्दा अझ खुशी हुने छैन। त्यहाँ केहि उपचार विकल्पहरू थिए, तर म गएँ Stelara । र यसले मेरो जीवन परिवर्तन गरेको छ। के म १००% स्पष्ट छु? होईन, म अझै मेरो कानमा पनी स्टेरोइड समाधानहरू लागू गर्दछु। मलाई अझै पनि समय-समयमा क्र्याकहरूको उपचार गर्न आवश्यक छ। र त्यहाँ एक सभ्य आकार छ, मेरो बायाँ बाछो मा लगातार दाग म cortisone इंजेक्शनको साथ उपचार।
डा। डे भन्छन्, सामयिक स्टेरोइड्स सोरायसिसको लागि धेरै सहयोगी हुन सक्छ। स्टेरोइड ईन्जेक्सन पनि सहयोगी हुन सक्छ तर आदर्श दीर्घ-अवधि समाधान होईन। मलाई विश्वास छ कि सोरायसिस धेरै कारकहरू प्रबन्ध गरेर उत्तम उपचार गरिन्छ, आहारबाट तनावदेखि छाला हेरचाहसम्म। यसको लागि प्रायः स्वास्थ्य सेवा टोलीको आवश्यक पर्दछ जसले तपाईंको त्वचा विशेषज्ञ, वात रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, र प्राथमिक उपचार चिकित्सक समावेश गर्न सक्दछ।
aleve र naproxen बीच के फरक छ?
सम्बन्धित : सोरायसिस उपचार र औषधिहरू
सोरायसिस स्वीकार्न सिक्दै (र समर्थन फेला पार्नुहोस्)
यसले केही फरक पार्दैन कि प्रत्येक एउटा पट्टिका गएको छैन। म शॉर्ट्स र टी-शर्टमा बिना रुचि हिंड्छु। म साथीहरू र अपरिचितहरूको आँखादेखि डराउँदिन। म अन्तमा आरामदायक छु, यदि थोरै खुजली भएन भने, मेरो आफ्नै छालामा।
यदि तपाईं त्यहाँ यस अवस्थामा बस्दै हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईंले घेरिएको तातोमा लामो बाहुला लगाइरहनुभएको छ, यदि तपाईंले देख्न सक्ने डरका कारण अरूहरूको नजरबाट आफ्नो आँखा टाढा गर्नुभयो भने - तपाईं एक्लो हुनुहुन्न भनेर जान्नुहोस्। जान्नुहोस् कि त्यहाँ आशा छ। यदि तपाईं हार मान्दै हुनुहुन्छ भने, नगर्नुहोस्। त्यहाँ अरू पनि छन् जसले उस्तै निराशा अनुभव गरेका छन्। त्यहाँ अरू पनि छन् जसले सोचे कि यो कहिल्यै राम्रो हुँदैन। त्यहाँ अरूहरू छन् जसले आशा गुमाए।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले यी मुद्दाहरूलाई जितेका छन्। त्यहाँ आशा छ, यहाँ सम्म कि यो यो लाग्दैन। प्रयास जारी राख्नु! तपाईंको त्वचा विशेषज्ञसँग कुरा गर्नुहोस्। तपाइँको मुक्ति एक उपचार टाढा हुन सक्छ। यदि यो अहिले उपलब्ध छैन भने, यो चाँडै हुन सक्छ। नयाँ उपचारहरू मार्गमा छन्। र यदि त्यहाँ उपचार गरीरहेको छैन भने पनि तपाई आफ्नो छाला स्वीकार्न सिक्न सक्नुहुन्छ र आफ्नै बारे राम्रो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। हरेस नखानुहोस्!
atenolol को लागी सामान्य नाम के हो
के म sudafed लिँदा रक्सी पिउन सक्छु?
latuda 40 मिलीग्राम को लागी प्रयोग गरीन्छ
के म एन्टिबायोटिक मा diflucan लिन सक्छु?
गर्भावस्था को समयमा के निद्रा औषधि सुरक्षित छ